तपाईँको कागजातमा वस्तुहरू परिमार्जन गर्न आदेशहरू समावेस छन्।
चयन गरिएका वस्तु(हरू) घुमाउँदछ ।
चयन वस्तु रूपान्तर गर्न विकल्प ।
Assignsaname to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.
चयन गरिएको वस्तुहरू समूह गर्छ, त्यसकारण तिनीहरू एउटा एकल वस्तुको रूपमा सार्न सकिन्छ ।
एकल वस्तुहरू भित्र चयन गरिएको समूह बिच्छेद गर्छ ।
चयन गरिएको समूह खोल्दछ, ता कि तपाईँले अलग वस्तुहरू खोल्नुहोस् । यदि चयन गरिएको समूहहरूमा नेस्ट गरिएको समूह समाहित छ भने, तपाईँले यो आदेश उपसमूहहरूमा दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ ।
समूह बन्द गर्नुहोस्
समूहबाट निस्कन्छ, ता कि तपाईँले समूहको अलग वस्तुहरू अझै सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न ।
एक्लो वस्तुमा दुई वा बढी चयन वस्तुहरू संयोजन गर्नुहोस्. Unlike grouping, संयोजन गरिएको वस्तुले तल्लो वस्तु स्ट्याकिङ अर्डरमा गुणहरू लिन्छ, तपाईँ split संयोन वस्तुहरू छुट्टाउन सक्नुहुन्छ, तर सक्कली वस्तु गुणहरू हरायो ।
स्प्लिट गर्नुहोस् संयोजन वस्तु ब्यक्त्तिगत वस्तुमा परिणाम गरिएको वस्तुहरू सँग उही पङ्क्ति र भर्न गुणहरू छन् संयोजन गरिएको वस्तु जस्तै ।
दुई वा बढी चयन गरिएको वस्तुहरूबाट आकार सिर्जना गर्नुहोस् ।
दुई वा बढी पङ्क्तिहरू जडान गरि पङ्क्ति वा बेजियर बक्रहरू निर्माण गर्नुहोस्, बेजियर बक्रहरू, वा अरू वस्तुहरू पङ्क्ति सँग. बन्द गरिएको वस्तुहरू जसले भर्ने समावेश गरेको छ त्यो पङ्क्तिहरूमा रूपान्तरण गरिन्छ र तिनीहरूको भर्ने हराउँदछ ।
जोडिएको पङ्क्तिहरू बिच्छेद गर्नुहोस् जुन जडान आदेश सँग जोडिएको छ.
Title is: परिमार्जन गर्नुहोस्